Joshua 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
8 Zvino Jehovha akati kuna Joshua: “Usatya kana kuvhunduka.+ Tora vanhu vose vehondo musimuke, muende kuAi. Ona, ndaisa mambo weAi nevanhu vake neguta rake nenyika yake muruoko rwako.+ 2 Itira guta reAi namambo waro sezvawakaitira guta reJeriko namambo waro.+ Asi mungapamba zvinopambwa zvaro nezvipfuwo kuti zvive zvenyu.+ Isa vanovandira guta racho necheseri kwaro.”+ 3 Naizvozvo Joshua nevanhu vose vehondo+ vakasimuka kuti vakwire kuAi, Joshua akasarudza varume zviuru makumi matatu, vane simba vakashinga,+ akavarega vachienda usiku. 4 Akavarayira achiti: “Onai, muchavandira+ guta necheseri kweguta racho. Musaenda kure kwazvo neguta racho, uye mose zvenyu murambe makagadzirira. 5 Asi ini nevanhu vose vandiinavo, tichaenda pedyo neguta racho. Kana vakabuda kuzosangana nesu sezvavakaita pakutanga,+ tichabva tavatiza. 6 Vachabuda vachitidzingirira kusvikira tavaendesa kure neguta racho, nokuti vachati, ‘Vari kutitiza sezvavakaita pakutanga.’+ Uye isu tichavatiza. 7 Imi—ibvai masimuka pamunenge makavandira, moita kuti guta racho rive renyu; uye Jehovha Mwari wenyu achariisa mumaoko enyu.+ 8 Pamunenge mangotora guta racho nesimba, pisai guta racho nomoto.+ Muite maererano neshoko raJehovha. Onai, ndakurayirai.”+ 9 Pashure paizvozvo Joshua akavatuma, ivo vakaenda kunzvimbo yokuvandira, vakagara pakati peBheteri neAi, kumavirira kweAi, asi Joshua akaramba akarara pakati pevanhu usiku ihwohwo. 10 Zvino Joshua akafumomuka,+ akaongorora vanhu, akakwira kuAi, iye nevarume vakuru vaIsraeri, vachitungamirira vanhu. 11 Vanhu vose vehondo+ vaaiva navo vakakwira, kuti vaswedere uye vasvike pamberi peguta racho, vakadzika musasa kuchamhembe kweAi, pakati pavo neAi paine mupata. 12 Munguva iyi akatora varume vanenge zviuru zvishanu akaita kuti vavandire+ pakati peBheteri+ neAi, kumavirira kweguta racho. 13 Naizvozvo vanhu vacho vakadzika musasa mukuru kuchamhembe kweguta racho+ uye shure shure kwawo kwaiva nechokumavirira kweguta racho,+ Joshua akaenda pakati pebani usiku ihwohwo. 14 Zvino mambo weAi paakangozviona, varume veguta racho vakakurumidza, vakafumomuka, vakabuda kuti vanorwa naIsraeri, iye nevanhu vake vose, panguva yakatarwa, pamberi pebani rerenje. Asi iye haana kuziva kuti paiva nevakanga vakamuvandira necheseri kweguta racho.+ 15 Joshua nevaIsraeri vose pavakakundwa navo,+ vakabva vatiza nenzira yokurenje.+ 16 Vanhu vose vaiva muguta racho vakashevedzwa kuti vavadzingirire, vakadzingirira Joshua, vakaendeswa kure neguta.+ 17 Hakuna kana murume akasara muAi neBheteri asina kubuda kunodzingirira Israeri, zvokuti vakasiya guta rakashama, vakadzingirira Israeri. 18 Zvino Jehovha akati kuna Joshua: “Tambanudzira pfumo duku riri muruoko rwako kuAi,+ nokuti ndichaisa guta racho muruoko rwako.”+ Naizvozvo Joshua akatambanudzira pfumo duku raiva muruoko rwake kuguta racho. 19 Zvino vakanga vakavandira vakakurumidza kusimuka panzvimbo yavo, vakatanga kumhanya paakangotambanudza ruoko rwake, vakapinda muguta, vakaritora.+ Vakakurumidza, vakapisa guta racho nomoto.+ 20 Zvino varume veAi vakatendeuka, uye tarira, utsi hweguta racho hwakanga huchikwira kumatenga, uye havana kukwanisa kutizira uku kana uko. Vanhu vakanga vachitizira kurenje vakatendeukira vaivatevera vacho. 21 Joshua nevaIsraeri vose vakaona kuti vakanga vakavandira+ vakanga vatora guta, uye kuti utsi hweguta hwakanga huchikwira kudenga, naizvozvo vakatendeuka vakatanga kuuraya varume veAi. 22 Vamwe vaya vakabuda muguta kuzosangana navo, zvokuti vakava pakati pevaIsraeri, ava vari kurutivi rwuno uye avo kune urwo, uye vakavauraya kusvikira pasisina mumwe wavo akasara, zvimwe akapona kana kuti akatiza.+ 23 Vakabata mambo+ weAi ari mupenyu vakamuunza pedyo naJoshua. 24 Zvino vaIsraeri pavakanga vachipedzisa kuuraya vagari vose vomuAi kusango, murenje mavakanga vavatevera, vakaramba vachiurayiwa, vose zvavo, nomuromo webakatwa kusvikira vapera. Pashure paizvozvo vaIsraeri vose vakadzokera kuAi, vakariparadza nomuromo webakatwa. 25 Vose vakaurayiwa pazuva iroro, kubvira kumurume kusvikira kumukadzi, vakasvika zviuru gumi nezviviri, vanhu vose veAi. 26 Joshua haana kudzosa ruoko rwake rwaakatambanudza narwo pfumo duku+ kusvikira aparadza chose vagari vose vomuAi.+ 27 VaIsraeri vakapamba zvipfuwo nezvinopambwa chete zveguta iroro kuti zvive zvavo, maererano neshoko raJehovha raakanga arayira Joshua.+ 28 Joshua akabva apisa Ai, akariita murwi nokusingagumi,+ kuti rive dongo kusvikira nhasi. 29 Akaturika mambo weAi+ padanda+ kusvikira nguva yemanheru; uye zuva zvarakanga rava kuda kuvira Joshua akarayira, vakabva vaburutsa chitunha chake+ padanda, vakachikanda panopindwa napo pagedhi reguta racho, vakaita murwi wematombo pamusoro pake, uchiripo kusvikira nhasi. 30 Panguva iyoyo Joshua ndipo paakavakira Jehovha Mwari waIsraeri atari,+ muGomo reEbhari,+ 31 sezvakanga zvarayirwa vanakomana vaIsraeri naMosesi mushumiri waJehovha, sokunyorwa kwazvakaitwa mubhuku romutemo+ waMosesi kuti: “Atari yematombo asina kuvezwa, asina kumboshandisirwa mudziyo wesimbi paari”;+ uye vakapa Jehovha zvinopiwa zvinopiswa pamusoro payo vakabayira zvibayiro zvokugoverana.+ 32 Akabva anyora pamatombo ipapo kopi+ yomutemo waMosesi waakanga anyora pamberi pevanakomana vaIsraeri.+ 33 VaIsraeri vose nevarume vakuru+ vavo nevatungamiriri nevatongi vavo vakanga vakamira kurutivi rwuno nokurutivi urwo rweAreka pamberi pevapristi,+ vaRevhi, vaitakura areka yesungano yaJehovha,+ mutorwa nomunhu womunyika yacho,+ hafu yavo iri pamberi peGomo reGerizimu+ uye imwe hafu yavo iri pamberi peGomo reEbhari,+ (sezvakanga zvarayirwa naMosesi mushumiri waJehovha,)+ kuti atange akomborera+ vanhu vaIsraeri. 34 Pashure peizvi akaverenga mashoko ose omutemo zvinonzwika,+ chikomborero+ nokutukwa,+ maererano nezvose zvakanyorwa mubhuku romutemo. 35 Hapana shoko pane ose akanga arayirwa naMosesi risina kuverengwa zvinonzwika naJoshua pamberi peungano yose yaIsraeri,+ pamwe chete nevakadzi+ nevana+ nevatorwa+ vaigara imomo vaifamba pakati pavo.